Moe Kai: ဖိနပ် ကလေးတွေ
ကျမရဲ. ဖိနပ်ကလေးက အတော့်ကို အိုဟောင်းနေပြီဆိုတော့ Christmas sales မှာ ဖိနပ် အသစ် ဝယ်ဖို. စဉ်းစားရပါတယ်။
မြန်မာမှာတုန်းကတော့ ဖိနပ်တမျိုး ၁၂ရာသီ စီးလို.ရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ဆောင်းတွင်းအေးရင် ဝတ်တဲ့ Long boots, နွေပူလာရင် ဝတ်တဲ့ Sandals အလုပ်တက်ရင် ဝတ်ရတဲ့ Smart shoes, အားကစားလုပ် လမ်းလျှောက်ထွက်ရင် ဝတ်တဲ့ Trainers မျိုးစုံ နေအောင် ရှိထားရပါတယ်။ တချို.ကောင်မလေးတွေကတော့ ည Night club သွားရင် ဝတ်တဲ့ ၅ပေ ၆ပေမြင့်တဲ့ ဒေါက် ချွန်ချွန်လေးတွေပါ ရှိမှာပါ။ ကျမကတော့ ဒီလို ဒေါက်ဖိနပ်မျိုးစီးတာ ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်ပေး နှိပ်စက်နေတာနဲ.တူလို. မစီးပါ။ တချို.ကပြောပါတယ်။ အဲဒီလို ဒေါက်မြင့်မြင့် ကလေး စီးလိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတက်သွားတယ်တဲ့။ ကျမစီးတုန်းကတော့ အဲဒီ Confidence က ဘယ်နေမှန်းမသိ၊ ချော်လဲပြီး ခြေကျိုးတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာ ခြေထောက်နာ ခါနာ ဒူးနာ ဆိုတာတွေနဲ. လာပြတဲ့ လူနာတွေ၊ High profile နာမည်ကျော် အားကစား သမားတွေမှာ ကျမတို. Biomechanical assessment ဆိုတာ လုပ်တတ်ပါတယ်။ သူတို.ရဲ. လမ်းလျှောက်တဲ့ စတိုင်၊ သူတို. ခြေထောက် အနေအထားကြည့်ပြီး ခြေထောက်ပြားတာ (Flat feed, pronated feet) ခြေခုန်းမြင့်တာ (high arch, supinated feet) လမ်းလျှောက်ရင်၊ ပြေးရင်၊ ခြေဖနောင့်နဲ. စပြီး နင်းသလား (Heel striker) ခြေထောက်ပြားပြီးချသလား (Midfoot or forefoot striker)၊ ခြေထောက်ဘယ်နေရာက ဖိအားအများဆုံး (Pressure points) အစရှိသဖြင့် စမ်းသပ်မှု မျိုးစုံ လုပ်တာပါ။ အဲလိုလုပ်ပြီးတော့ သူတို.ရဲ. လမ်းလျှောက်တဲ့ စတိုင်ကို ပြန်ပေးရုံတင်မက၊ သူတို.စီးတဲ့ ဖိနပ်တွေကိုလဲ insole shoes (ဖိနပ်ထဲ ထဲ့ပေးတဲ့ အခံတွေ), Heel raise, အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်လုပ်ထဲ့ပေးပြီး Modify လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။
အရင်ထဲက ကျမတွေးမိတာက ဒီလို ရောဂါ အခြေအနေမျိုးသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကတီပါဖိနပ်၊ ဖိနပ်အပြား၊ ဒေါက်ဖိနပ် ဆိုတာတွေဟာ insole ထဲ့ပြီး ပြင်လို.ရတဲ့ ဖိနပ်မျိုးတွေမှ မဟုတ်တာ။ တယောက်ထဲ တွေးမိတာမှ မကြာသေး။ စင်္ကာပူရောက်နေတဲ့ အင်္ဂလန်က ဆရာဝန်မ တယောက် ညည်းတာ တွေ.မိလိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ အားလုံးက Sandals, flipflops တွေပဲ ဝတ်ပြီး လျှောက်သွားနေတော့ Plantar fasciopathy (ခြေဖိနောက်နာတဲ့) လူနာတွေခြည်း တွေ.တွေ.နေရတယ် ဆိုပြီးတော့ပါ။
အဲဒီလို မွေးကထဲက လျှောက်လာ သွားလာနေတဲ့ စတိုင်ကို နည်းအမျိုးမျိးစုံနဲ. ပိုကောင်းတဲ့ စတိုင်ပြင်ဖို. ကြိုးစားနေတဲ့ ဆေးအသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေ ရှိသလို၊ တချိန်ထဲမှာပဲ တချို.တွေကလဲ အဲလို အမျိုးစုံ Modify လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေစီးတာ ပြဿနာပိုများလာအောင်သာ ဖိတ်ခေါ်နေတာ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အညင်းပွားကြပြန်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Minimalist shoes လို.ခေါ်တဲ့ ဘာထောက်အမြင့် Heel Support အထောက်အကူမှ မပါပဲ ဖိနပ်ကို ပါးနိုင်သမျှ အပါးဆုံးပြန်လုပ်ပြီး စီးနေတဲ့ နာမည်ကြီး တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဖိနပ်မပါပဲ ပြေးတာ အားကစားလုပ်တာ (Bare foot running) တွေတောင် အတော် ပြန်ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒီ အားကစား ဆေးပညာမှာလဲ တခြားဘာသာရပ်တွေလို နေ.စဉ်နှင့် အမျှ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ နေတာကြောင့် နောက်နေ.များ ဘာဖြစ်ဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်း အခုတော့ ဖိနပ် အသစ်ကလေးရဖို. စိတ်ကူးယဉ် ပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးမယ်။